Rutsigiro rwehunyanzvi - Beijing Zohonice Runako Equipment Co., Ltd.
Runhare: 0086- (0) 10-60296356
IPL LASER Bvudzi RINOBvisa
DIODE LASER Bvudzi RINOBvisa
ND YAG LASER TATOO KUBVISA
KUMASHURE KUSHANDISA DZIVA RAKANAKA
HIFU 3D 4D DZAKATEVEDZANA
PDT akatungamira PHOTOTHERAPY
SpARE CHIKAMU ZVINODZIDZISWA
IPL DPL Sarudza SHR
Q Chinja Nd: Yag Laser
Yedu Yehunyanzvi Rutsigiro timu iripo kune iwe nhanho imwe neimwe yenzira ine yakakwira! Y inoteerera inoenderera sevhisi yakagadzirirwa kuona zuva nezuva kushanda kwehunyanzvi hwekurapa kwako kunogara kuchimhanya pakakwirira kuita. Rutsigiro rwedu rwehunyanzvi zvakare zvinoreva kuti isu takufukidza muchiitiko chisingawanzo pane kusashanda kwehunyanzvi, zvichigonesa kuti uenderere mberi nebhizimusi senguva dzose uye nekukanganisa kushoma kuzuva rako. Kana iwe uchimbonzwa usina chokwadi nezve matanho api aunotora maererano neyako yekushongedza michina, ingo fonera timu yedu - isu tinogara tiri pano kuzobatsira.
Technical rutsigiro mabhenefiti
Kuwana kuMelbourne kwakavakirwa rutsigiro rwefoni
1.Local mainjiniya aripo kubatsira Australia yakafara
2. Zuva rimwe chete rinotumirwa pamidziyo yechikwereti
3.Kuwana kumisikidza uye nekugadzirisa matambudziko evhidhiyo maficha
4.Spare zvikamu zvekuwanika sevhisi
Kumhanyisa rakabudirira bhizinesi rerunako hakuna smalt feat uye kunouya neyakagovaniswa mugove wemufaro, pamwe nematambudziko. Yedu yakanaka kiriniki yekutsigira sevhisi ndiyo nzira yedu yekukubatsira zvakanaka kubata zuva nezuva mashandiro esalon yako, spa, kiriniki kana tsika uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge waita. Kana paine chero zuva paunongonzwa mukati memusoro wako. wadii kufonera kiriniki yedu yekutsigira timu kune rimwe zano rehunyanzvi?
Clinical rutsigiro mabhenefiti
1. Anokodzera indasitiri rutsigiro runowanikwa nefoni uye email.
2.Treatment maprotocol ekutsvedza kumhanya kweako aesthetic masevhisi
Kuwana mafomu ekubvunzurudza, mafomu ekubvumidza uye dzidzo yemurwere
4.Kusvikira kumakiriniki ekutsvagisa mapepa uye maganda maficha maficha
5.Shandisa edu ekutsigira mavhidhiyo, maitiro ekurapa uye zvimwe zvakawanda
KuZohonice Runako Co.Ltd., Isu tinosanganisira yakazara yepasi-kirasi chirongwa chekudzidzisa nekutenga kwechigadzirwa chako kungave chiri IPL muchina. YAG Laser nyora kubviswa kana laser bvudzi kubvisa michina. Izvi ndezvekuona kuti unomuka nekumhanya uine chivimbo paunenge uchiita marapirwo ako matsva ekurapa, zvichikubvumidza iwe kuendesa yakanakisa sevhisi sevhisi kune vako vatengi izvo zvinobva zvawedzera kukura kwevatengi kuvimbika uye zvirinani zvinobatsira zvinouya zvebhizinesi rako zvese izvozvi uye munguva refu mhanya.
Midziyo yekudzidzisa mabhenefiti
1.Purogiramu inovhara dzidziso. inoshanda uye kubvunza kudzidziswa
2. Dzidza kubva kune edu akazara anokwanisa, indasitiri nyanzvi varairidzi
3. Nakidzwa nekudzidza munzvimbo dzakajeka, dzemazuva ano dzekudzidzisa
4.Certifiketi yekutora chikamu yakapihwa kana wapedza
5.Kudzidzira zvikamu zvinowanika kuitira kuchengetedza mabasa ebasa
Pamwe pamwe nehunyanzvi hwedzidzo yekudzidzira uye kuenderera mberi kwehunyanzvi rutsigiro. isu tinonzwa kuti kuburitsa izwi pamusoro penzvimbo dzako dzinonakidza dzekurapa kunokosha zvakare mukubudirira uye kukura kwebhizimusi rako rerunako. Ichi ndicho chikonzero isu tinosanganisa kushambadzira kwakazara uye rutsigiro rwekusimudzira nezvose zvigadzirwa zvekutenga. Zviwanikwa zvedu zvinotora zvese kubva kuFacebook kukwidziridzwa kusvika-mumba zvigadzirwa zvigadzirwa. Uye zvechokwadi, timu yedu yekushambadzira iripo kuti ubatsire kana iwe ukazomboda kurairwa maitiro ekuona kuti bhizinesi rako rakamira kubva muchaunga.
Kushambadzira rutsigiro mabhenefiti
1. Kuwana zvinyorwa. mabrochure, mafirita matemplate uye emaraibhurari emifananidzo
2.Taisa yakagadzirira-ku-enda yakanyorwa yakanyorwa email uye webhusaiti zvemukati
3.Social media media guides uye zvemukati zvemaxi zvinoshaya yako online online
4.Kusvikira kumamenu ekurapa, madhairekitori emitengo uye mapoinzi ekutaura kwevatengi
5. Pamberi uye Mushure memifananidzo matemplate. mavhidhiyo ekusimudzira uye zvimwe zvakawanda
3 Ruvara Smart Tecar Radio Frequency RF Sk ...
Ichangobva Kusainwa Mumiriri weIsrael kune LED MURI ...
Wanga uchiziva here kuti yazvino HIEMT ine ...
660nm bvudzi kukura muchina runako bvudzi los ...
800Miter Maodzanyemba 2Village LangFa, HuangCui Town, DaxingDistrict, Bejing
Tifonere izvozvi: 0086- (0) 10-60296356